माल्टामा आकर्षक रोजगारीको अवसर, तलब २ लाख ८२ हजारसम्म, सेवा शूल्क ३० हजार मात्रै ! – Dainik Samchar
January 22, 2021 495
खाने बस्ने सुविधा सहित काम अनुसार न्यूनतम मासिक तलब १ लाख ३४ हजार देखि अधिकतम २ लाख ८२ हजार सम्म तोकिएको छ । ओभर टाईम सुविधा, वार्षिक बिदा कम्पनीको नियमानुसार हुने जनाइको छ । ***डिमाण्डमा आवेदन गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोला***
Prevमेरो बहिनी लाई बचाइ दिनुहोस् म बिन्ती गर्छु।यो पोस्ट लाई सक्दो शेयर गरी भाग्य न्यौपाने सामु पुर्याई दिनु होला।
Nextनेपालको नाम विश्व सामु चम्काएका विश्व च्याम्पियन कार्की काडमाडौँ आउदै गर्दा बाटोमै अस्ताए !
काठमाडौं कोटेश्वरबाट अचम्मका ब्यक्ती पक्राउ ! स्वयम्भु, सीतापाइला, तीनकुने, कागेश्वरी, मूलपानी सबै ठाउँमा भ्याएछन (2038)
खुलाए बिनय र पुजाले आफ्नो अ’न्तरजातीय बिहे गर्नुको का’रण,सम्पतिको लागि बिहे गरिस भन्नेलाइ क’डा ज’बाफ (1591)